China Wu Wang Wo လက်ကားထုတ်လုပ်သူ အခြောက်လှန်း ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပန်းလက်ဖက်ရည် Myosotis Sylvatica Forget-Me-Not ပန်း ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |အကောင်းဆုံး
Wu Wang Wo လက်ကားထုတ်လုပ်သူ အခြောက်လှန်းထားသော ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပန်းလက်ဖက်ရည် Myosotis Sylvatica Forget-Me-Not ပန်းပွင့်
တရုတ်နာမည်: wu wang wo
အင်္ဂလိပ်အမည် - မမေ့ပါနှင့်
လက်တင်အမည်- Myosotis silvatica Ehrh။ဟောင်း Hoffm။
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်- အပူနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ နှလုံးကို ကြည်လင်စေပြီး အမြင်အာရုံကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အာဟာရဓာတ်နှင့် ကျောက်ကပ်ကို သန်မာစေခြင်း
Myosotis sylvatica သည် lithospermaceae ရှိ Myosotis ၏နှစ်ရှည်ပင်ဆေးပင်ဖြစ်သည်။၎င်း၏အရွက်များသည် တလှည့်စီ၊ ကျဉ်းမြောင်းစွာ oblanceolate သို့မဟုတ် strip oblanceolate ဖြစ်သည်။ပန်းပွင့်များသည် အလယ်တွင် အဝါရောင် ပိုးမွှားလက်စွပ်ဖြင့် အပြာရောင် ရောစပ်ထားသည်။ယန်ကို နှစ်သက်သည်၊ ယင်ကို ခံနိုင်သည်၊ မိမိကိုယ်တိုင် မျိုးစေ့ဖြင့် ပြန့်ပွားရန် လွယ်ကူသည်။ပန်းသည် သေးငယ်ပြီး လှပသည်၊ အရောင်အသွေး လိုက်ဖက်ညီပြီး မျက်လုံးကို ဖမ်းစားနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် ပန်းပွင့်၏ အဖွင့်၊ တစ်ဝက်ပါရှိသော တစ်ဝက်နှင့် တစ်ဝက် ပွင့်ထွက်ကာ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး မေ့မရနိုင်သော အပွင့်များနှင့်အတူ တဖြည်းဖြည်း ရှည်ထွက်လာသည်။ယောက်ျားလေး နဲ့ မိန်းမ အချင်းချင်း ပေးလှူကြတဲ့ ခံစားချက်လေးနက်ကို ဖော်ပြဖို့ ငါ့ကို မမေ့ပါနဲ့။
အပူနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးကာ နှလုံးကို ကြည်လင်စေပြီး မျက်စိအားကောင်းစေကာ အဟာရဓာတ်နှင့် ကျောက်ကပ်ကို သန်မာစေပါသည်။
ဝက်ခြံ၊ မွေးလမ်းကြောင်း၊ ကြမ်းတမ်းသော အသားအရေ၊ အမြင်အာရုံ မှုန်ဝါးခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အဝါရောင် ဆီးခဏခြင်း စသည်တို့အတွက် သင့်လျော်ပြီး အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေကာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လှပမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
1. Beauty Tea ကို မမေ့ပါနဲ့ : ပန်းပွင့် ၊ လက်ဖက်စိမ်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 1 ဇွန်း ၊ ပျားရည် အနည်းငယ် ၊Don't forget me flower and green tea ကို ခွက်ထဲထည့်၊ ရေနွေးနဲ့ ချက်ပြီး ၃ မိနစ်လောက်စောင့်ပြီး don't forget me flower အရသာခံပြီးနောက် ပျားရည်ထည့်ပါ။အသားအရေကိုဖြူစင်စေပြီး ဝက်ခြံနှင့်တင်းတိပ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။
2. Erhua လက်ဖက်ရည်ကို မမေ့ပါနှင့် ၊ Erhua လက်ဖက်ရည်နှင့် ပျားရည်စီးလက်ဖက်ခြောက်ကို တူညီသော ပမာဏဖြင့် ရေစိမ်ပါ သို့မဟုတ် ရေတွင် ဖျော်ရည် 1 ကြိမ် နေ့စဉ် သောက်ပါ။အပူနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အပူဖုကလေးများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
3. Xie Ye လက်ဖက်ရည်ကို မမေ့ပါနှင့်။ ငါပန်းပွင့်၊ Xie Ye ဒယ်အိုး ၁၀ ဂရမ်စီ၊ စိမ်သောက်၊ သို့မဟုတ် ဖျော်ရည် ၁ ကြိမ် နေ့စဉ် သောက်ပါ။အပူတွေကို ကင်းစင်စေပြီး ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
4. နှင်းဆီလက်ဖက်ရည်ကို မမေ့ပါနဲ့- ပန်းပွင့်၊ နှင်းဆီပွင့် ၁၀ ဂရမ်စီ၊ ပွက်ပွက်ဖျော်ရည် ဒါမှမဟုတ် ဖျော်ရည် ၁ ကြိမ် တစ်နေ့ကို သောက်ပါ။၎င်းသည် dysmenorrhea နှင့် dysmenorrhea အတွက်သင့်လျော်သည်။
5. ဂန္ဓမာလက်ဖက်ရည်ကို မမေ့ပါနှင့်။ ငါ့ပန်းပွင့်၊ ဂန္ဓမာ ၁၀ ဂရမ်စီ၊ စိမ်သောက်၊ သို့မဟုတ် ဖျော်ရည်၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်၊အသည်းကို သက်သာစေပြီး အပူကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။သွေးတိုးရောဂါ၊ မူးဝေခြင်း၊ အမြင်မှုန်ဝါးခြင်း စသည်တို့အတွက် သင့်လျော်သည်။
6. ဝါးရွက်လက်ဖက်ရည်ကို မမေ့ပါနှင့်။ ငါ့ပန်းပွင့်၊ cizhuye 10 ဂရမ်ကို ရေစိမ်ထားပါ သို့မဟုတ် ရေတွင်ကြော်ပြီး တစ်နေ့ 1 ကြိမ်၊အပူကို ကင်းစင်စေပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
၇။ ကြာစေ့လက်ဖက်ရည်ကို မမေ့နဲ့နော် ပန်းပွင့်၊ ကြာစေ့ ၁၀ ဂရမ်ကို ရေစိမ်ထား၊ ဒါမှမဟုတ် ရေနဲ့ကြော်ပြီး တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်၊အပူကို ကင်းစင်စေပြီး စိုစွတ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။သုက်ပိုးမွှားရောဂါ၊ အိပ်မက်မြေစသည်တို့အတွက် သင့်လျော်သည်။
ပန်းအများစုပွင့်ပြီး အရောင်ရင့်လာသောအခါ ဖြတ်ပါ။
လတ်ဆတ်သောအပွင့် သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သောပန်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
ယခင်- Niu Bnag Chinese Herbal Medicine Burdock root လှီး Arctium Lappa Root
နောက်တစ်ခု: Jin Zhan Ju လက်ဖက်ရည်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် ပန်းခြောက် Calendula Officinalis ရောင်းအား
Ye Jiang Hua ထုတ်လုပ်သူ Bulk Ginger Flavor Dr...
အစုလိုက် အမွှေးရနံ့ ထုတ်လုပ်သူ ခြောက်သွေ့သော ရွှေရောင် ရှည်လျားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်...